स्व.श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी साथी संगम भण्डारीले बताईन श्रीकृष्ण को जीवनी, स्वेता खड्का लाई यसो भनिन् - Aajako Nepali Khabar
स्व.श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी साथी संगम भण्डारीले बताईन श्रीकृष्ण को जीवनी, स्वेता खड्का लाई यसो भनिन्
श्वेतालाई हामी के सल्लाह दिने उसको अगाडि त हामी मान्छे होइन उसको आगाडी त हामी भुसुना हो. एउटा धेरै माथि उतर आकाशमा उडिरहेको व्यक्ति हो हामी जमिन मा हिनिरखेको साइकलमा हिँडिरहेको मान्छे उ का प्लनेमा आकाशमा उडिरहेको हो ।
उनले सल्लाह दिने पर्दैन ऊ आफैंलाई थाहा छ। तर 1,2 वटा कुरा जय सुनेर हास उठ्यो । के भन्दाखेरि माझी बस्तीको नाममा एउटा चकलेट पनि खाको छैन रे भन्ने कुरा त मलाई अलि अपाच्य लाग्यो ।
हजुर ले श्रीकृष्ण दाईलाई पनि struggling फेस देखि नै चिन्नुभएको हो , अलिकति भनु न कस्तो हुनुहुन्थ्यो उहाँ? उहाँ, दुःख धेरै गर्ने मान्छे दुःख गरेर माथि चढ्नु भएको हो तर त्यहाँबाट उहा बिस्तारै उहाँको life परिवर्तन हुँदै गयो राम्रो जिन्दगी सुरु भयो मेरो अनुभवमा चैं. तर एकदम दुःख गरेर संघर्ष गरेर आएको व्यक्ति हो ।
श्वेता खड्काको नाम से मैले सुनी राखेको जूनियर ho बहिनि म भन्दा तर र मेरो गाउँ र उसको गाउँ पनौती खोपासी भन्ने ठाउँमा माइती नजिकै पर्यो । हाम्रो त वडा एउटै गाउँ पनौती रैछ । आफ्नो टाईम आउँछ माटो हिरामा जान्छ हिरा माटोमा आउछ ।
मैले राजेश हमालको duplicate देखि भुवन केसीको देखि शिव श्रेष्ठको देखेको खोइ त ती व्यक्तिहरु अहिले ? हिरो हिरोइन कतिको देखे खोइ कहाँ गए ति मान्छे आज सबै बिलायनि आफ्नो क्यारेक्टर लै चिन्ने मात्र टिक्छ ।
नेपालमा सबभन्दा पहिला ads बनाउन न direction गर्न देको तुलसी घिमिरेलाई मैले हो । आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि २० हजार पैसा दिएर ads बनाउन लगाको मैले एउटा से मलाई गर्व लाग्छ । अमृत वनस्पति घिउको direction गर्न देखेको मैले 20 वर्ष अगाडि त्यसै गर्वका साथ भन्छु तुलसी घिमिरेलाई ।
उहाँहरूलाई पनि पहिलो direction गर्न देखें मैले मेरो त पहिलो भइने हाल्यो उहाँहरूको पनि पहिलो भयो । म खडेरीको बेलामा बनेको एउटा कलाकार हुँ के मैले आमाको रोल पनि खेले मलाई चै नेपाल बुढी भनेर भोलौथे म त्या फुल बेचेर बसेको हुन्थे ।
सबै नेपालीहरुले कति दुःख गरेर विदेशमा गएर दुःख गरेर पठाको पैसा एक-एक गरेर एउटा माझी बस्ती को लागि एउटा महिलाले केही गर्न लाग्यो है भन्दै पैसा पठाएका थिए उसलाई सहयोग गर्नुभएको हो । अरुको कुरा अब उसको अन्तरात्मा स्वेता आफूलाई थाहा होला जो दिने दाताहरु उहाँहरुलाई थाहा होला त्यो कुरा त ढिलो र चाँडो आइहाल्छ तर त्यत्रो साहसी त्यत्रो ठूलो काम घुमी वर्णको लागि कदम उठाउनु पनि त्यो ठूलो कुरा हो ।
सुर्य भगवान को दर्शन गर्दै हेर्नुस होस् साेचेकाे काम बन्नेछ, आजको राशिफल २०७७ फागुन २३ गते (आइतबार)